Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဆောင်းနှင်းကြွေ မြရွက်ဝေ
Writer Sein Lyan Time 8:52 pm
(စတာ မဟုတ် အတည် ပြောသည်)
မောင်ဆောင်း တစ်ယောက် ယုအချစ်ကို အမြန်ဆုံးရပါစေ။
တကယ်လား...အဟုတ်လား...ချစ်သူတိုင်းလဲ ညားကြပါစေ...ညားသူတိုင်းလဲ ချစ်ကြပါစေ..း))
ရိက္ခာ ထောက်ပံ့မှုကိုတော့ ဖြတ်တောက်ရတော့မယ်
အဲ့ အနော်နီးမတ်စ် က မြ ပါ...း)၊ အိပ်ရာ နိုးနိုးချင်း တခေါက် လာထပ်ဖတ်တယ် စိန်...
ပြာလဲ့ကြည်စင်တဲ့ “မိုး” သားအောက်က အေး“ချမ်း”တဲ့ “ဆောင်း” ရင်ခွင်ထဲမှာ....
“ယု”ယကြင်နာမှုတွေ “ဝေ”ဆာစွာနဲ့ “ဝင်း”ပတဲ့ နေ့ရက်တွေကို.....ကြည်နူးစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ..။
သံယောဇဉ် တွေ..... သံယောဇဉ်......
တကယ်တော့ တစ်ချောင်းတည်းနဲ့ လူနှစ်ဦးကို ချိတ်ဆက်တွယ်ငင်ထားတဲ့ ကြိုးတစ်စ ဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့...
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ... နားလည်ယုံကြည်မှု.. ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ ထားကြတဲ့ သံယောဇဉ်တွေ မြင်နိုင်ကြပါစေ..
စိတ်ကူးယဉ် ရေးဖွဲ့ထားတယ် ဆိုပေမဲ့.. ပေးဆပ်သူတို့ နှလုံးသားကို လှပ်ခနဲ ဖော်ပြသွားတာ.. ဇာတ်ကောင်တွေ လွဲပီး ဖတ်သွားပါတယ် (ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူလဲ လာမမေးနဲ့.. အသေသတ်.. မဖြေဘူး)
လုပ်တယ်ဟ အဲ့ဂလိုကြီးမလုပ်သင့်ပါဘူးဂျာ......... အချင်းချင်းတွေပဲ အဲ့လိုတော့ မကောင်းပါဘူးးးးး ထဲ့ကြီးတော့ မဖဲ့ကောင်းပါဘူးးးးးးးးးး)
ရုပ်တည်နဲ့ မုန့်တီ လုပ်စားသွားတယ်
22 January 2010 at 04:39
ဒီတခါ ၁ မဟုတ်တော့ပါလားးးး
ဘယ်တုန်းက တင်လိုက်မှန်း မသိလိုက်ဘူးးး
22 January 2010 at 04:52
ဒါပေမယ့် မျက်လုံးထဲမှာတော့ ကွင်းကနဲ ကွက်ကနဲပဲ။:D
ကဗျာလေးတွေကိုလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ အစပ်အဟပ်တည့်အောင် ထည့်သွားလိုက်တာ..
Anonymous ရေးသွားတာ ထောက်ခံပါတယ်ဗျို့.............
ဆောင်းဆောင်းဖက်က ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် မောင်ဆောင်း ပျော်မှာပါ။ အကုန်လုံး ပျော်မှာပါ။
that's why you wanna meet Freyja ?? :)
ကောင်းလိုက်တာ ရေးသွားတာ..အဖြစ်အပျက်တွေကို ဇာတ်ကောင်နဲ့ တွဲပြီး ဖတ်သွား၏...:))))))
တကယ် လားး ..
အဟုတ် လားး ..
အတည် လားး ..
ညီမလေး ဆောင်း ရဲ့
ဘယ်သူ ပါလဲ ... ?
သို့လော .. သို့လော.. မလုပ်ပါနဲ့ ..!
တိုကြီး ဆောင်းရဲ့ ညီမလေး
ဓါတ်တိုင် နဲ့ မခိုင်
စိတ်ကူး အကြီး အကျယ် နှစ်ပိသာ လောက်ကြီးကို ယဉ်သွားတယ်.......
(ဘယ်လိုစိတ်ကူးယဉ်တာလဲ ဘာမှလာမမေးနဲ့ .... အသေသတ် မဖြေဘူး)
ဆောင်းရေ ရရင်ရ မရရင်တော့ ရိုက်လုကွာ ...
ဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူး သူများတွေ ပြောတော့ ဝင်ပြောရဦးမယ် =D
ကိုသီဟသစ် လမ်းစဉ် မလိုက်မိပါစေနှင့်
၃ နှစ် ၃ မိုး
jie jie နေခြည် လိုလဲ မဖြစ်ပါစေနှင့်
၇ နှစ် ၇ ရက်
တကယ် pm ဘာဆို ဘာမှ မသိပါ။
ပိုစ်ရေးတဲ့လက်တွေက တယ်ဟုတ်ပါလား ကိုဖိုးစိန်ရ.. စာရေးသားတွေ ကောင်းသလို.. ဇါတ်တွေတောင် နိုင်နေပြီပဲ..
မေ့ လို့ ဆောင်းဆောင်း ဇွဲကောင်းမှုကြောင့် ဇွဲဆုရပါစေ။